Asa 3 - Ny Baiboly
Asa toko 3
Ny nanasitranan'i Piera ilay lehilahy malemy tongotra - Ny toritenin'i Piera.
1Ary Piera sy Joany nankao an-tempoly tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny ora fahasivy. 2Nisy kosa lehilahy anankiray malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny nentina isan'andro sy napetraka teo am-baravaran'ny tempoly atao hoe Tsaraendrika mba hangataka fiantrana tamin'izay niditra tao an-tempoly. 3Nony nahita an'i Piera sy Joany ndeha hiditra ny tempoly ralehilahy io, dia nangataka fiantrana tamin'izy ireo. 4Nibanjina azy Piera mbamin'i Joany nanao hoe: Jereo izahay. 5Dia nataony tsara jery izy ireo, fa nanantena hahazo zavatra taminy izy. 6Fa hoy Piera: Tsy manam-bolafotsy na volamena aho; fa izay ananako no omeko anao: Amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy avy any Nazareta, mamindrà. 7Sady noraisiny tamin'ny tànany an-kavanana izy sy natsangany. Natanjaka niaraka tamin'izay ny ranjony sy ny tongony, 8dia niantsambotra izy sy nijoro ary namindra, ka niara-niditra tamin'izy ireo tao an-tempoly namindra sy niantsambotsambotra, ary nidera an'Andriamanitra. 9Nahita azy namindra sy nidera an'Andriamantra ny vahoaka rehetra, 10sady fantany tsara fa izy io indrindra no ilay nipetraka teo am-baravaran'ny tempoly atao hoe Tsaraendrika mba hangataka fiantrana, ka gaga sy talanjona izy ireo noho ny zavatra nitranga tamin-dralehilahy. 11Ary noho izy io tsy niala teo amin'i Piera sy Joany, dia nidodododo ny vahoaka nankeo amin'izy ireo teo amin'ny lavarangan'i Salomona ka talanjona.
12Nony nahita izany Piera, dia niteny tamin'ny vahoaka hoe: Ry Israelita, nahoana no gaga amin'izany hianareo, ary nahoana no mibanjina anay? Angaha ataonareo fa ny herinay sy ny fahamasinanay no mampamindra azy io? 13Ny Andriamanitr'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesoa Zanany, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilaty, na dia nataony halefa aza izy. 14Ny Masina sy ny Marina nolavinareo fa ny lehilahy mpamono olona no nangatahanareo famelana. 15Hianareo namono ny Tompon'ny aina; fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izahay ireto no vavolombelon'izany. 16Noho ny finoana ny anarany no nampahatanjahan'ny anarany an'io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io; eny, ny finoana avy aminy no nanome azy izao fahasitranana tsara teo imasonareo rehetra izao. 17Ary ankehitriny, ry rahalahy, fantatro tsara fa ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, toy izany koa ireo mpanapaka anareo; 18fa notanterahin'Andriamanitra tamin'izany kosa izay voalazany rahateo amin'ny vavan'ny mpaminany rehetra fa hijaly ny Kristy.
19Koa mivaloza, ary mibebàha, mba hovonoina ny helokareo, 20ka ho tonga ny andro mahavelombelona avy amin'ny Tompo, sy hanirahany an'ilay voatendry ho anareo, dia Jesoa-Kristy, 21ilay tsy maintsy horaisin'ny lanitra ambara-pihavin'ny andro fanavaozana ny zavatra rehetra, araka izay voalazan'Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany masina, hatramin'ny ela. 22Fa hoy Moizy hoe: Ny Tompo Andriamanitrareo hanangana ho anareo Mpaminany tahaka ahy avy amin'ny rahalahinareo; izy no hohenoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo, 23fa izay rehetra tsy hihaino izany Mpaminany izany, dia haringana tsy ho eo amin'ny vahoaka intsony. 24Ary ny mpaminany rehetra izay niteny hatramin'i Samoely no mankaty dia samy nanambara izao andro izao avokoa. 25Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika, raha izy nilaza tamin'i Abrahama hoe: Ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, 26ka ho anareo aloha no nananganan'Andriamanitra ny Mpanompony, sy nanirahany azy hanasoa anareo mba samy hialanareo amin'ny nataonareo avy. >